KOHIA - BEERASHADA IYO DARYEELKA BEERTA - CAARADA CAARADA
Beerta yar ayaa og waxa kohia u eg yahay. Laakiin shakhsi ahaan, ama sawirada dhirta oo ay ka soo baxaan burooyinka, ayaa laga yaabaa inay arkaan wax walba. Qodobka ugu wanaagsan ee suuban ee kohia wuxuu bixiyaa fursado aan xad lahayn oo loo isticmaalo. Thanks to caanaha, warshad, ayaa hore loo isticmaalay oo kaliya sameynta kabaha, maanta waxay heshay nolol cusub, oo ku daboolay midabyo badan oo dhalaalaya. Kohia - Tani waa alaabta la dhammeeyay ee isbeddelka beertaada, adiguna kaliya ayaad haysataa degenaansho iyo daryeel dheeraad ah isaga. Waxaan ka wada hadli doonnaa arrintan.
Xeerarka aasaasiga ah ee beerto kohii
Koritaanka kokaha waa geedi-socod aad u xiiso badan. Geedkani wuxuu jecel yahay aagga iftiin leh. Laakiin haddii aysan jirin meelo ka baxsan beerta, ka dibna ha niyad jabin, kohia sidoo kale lagu beeray karaa mugdi ah. Su'aasha ugu weyn waa haddii ay jiri doonto iftiin maalin ka waqti ah. Haddii aad si gebi ahaanba u diidday geedka qorraxda, waxay si weyn u yarayn doontaa horumarka.
Waa muhiim! Duurjoogta, kohia waxay ku koraan meelaha semi-lamadegaanka. Tani waa mid ka mid ah sifooyinka beeraha.
Goorma cohiu ku beeri karaa? Wax soo saarayaasha abuurka ayaa u muuqda inay beertooda ka beeraan min March ilaa Abriil 20. Oo lagu beeray dhulka dhamaadkii bishii May. Sidaa darteed, kohia lagu dari karaa liiska dalagyada kuwaas oo geedo ah laga soo goosto March.
Marka la eego ciidda, kokhiya waa mid aan qabyo ahayn. Waxay qaadan doontaa xidid xitaa carrada kaynta liita. Laakiin Kohiya uma dulqaadan karo carrada acidic iyo waterlogged. Heerka kohii qaangaarka ah wuxuu u dhexeeyaa 75-100 cm.
Bannaanka u khibrad leh ayaa tilmaamaya in Warshadani waa mid xoriyad-jecel. Goobaha furan, marka laga maqnaado "deriska", kokhiya waxay u koraan si ka fiican sidii ay u dhow yihiin saaxiibbadooda ama dhir kale. Waa aag ballaaran oo u oggolaanaya Kochia in ay kordhiso tirada daaqsinka. Haddii ay dhacdo xayiraad xayiraad kale oo geedo kale ah, geedka ayaa bilaabmaa inuu horay u barbareeyo waqtiga, iyo sifooyinka qurxinta ee ubax aan la qadarin. Tani waxay sharraxaysaa xaqiiqda ah Kohiya lama korin karo guriga dhexdiisa.
Ma taqaanaa? Geedkii ugu da'da weynaa ee dunida, oo koraya ilaa maanta, waa geedka geedaha ee Maraykanka oo da'diisu tahay 4500 sano.
Daryeelka buuxa ee dooxooyinka kohii
Inta lagu jiro xilliga daaqsinka kohia u baahan tahay dabacsanaan joogto ah, jaridda, waraabinta ciidda iyo quudinta bacriminta macdanta. Baahida dharka ugu sareysa waa in la soo galo markii ugu horeysay maalinta tobnaad kaddib marka la furo dhul furan, iyo mar labaad - bil kadib.
Aad bay muhiim u tahay inaad qaaddo kohii biyaha ku jira maqnaanshaha roobka. Tani waxay lagama maarmaan tahay in laga hortago ubax mudo yar oo qurxoon. Ka dib markii samaynta taajka iyo koritaanka xoog leh, waxaad ku daadin kartaa geed ku beeri bacriminta nitrogen. Haddii kohia ay xadidan tahay nafaqada, way baabi'i doontaa. Iyada oo caleemo aan biyo ku filan ku dhicin oo ay u muuqdaan kuwo xun.
Waxay sidoo kale jeceshahay ciidda si fiican loo bacrimiyey, duurka waxay ku kori doontaa mid aad u qurux badan.
Gooyo iyo sameynta baadiyaha kohii
Sida kor ku xusan, Kohiya si fiican u dulqaadanayo manjooyin. Waxaa jira su'aal keliyasida quruxda xagaaga loo qurxiyo.Gaar ahaan tan aad ku siin kartid qaab kasta oo muddo dheer socon doona.
Waxaa muddo dheer loo soo bandhigay, isla markaana maanta si ballaaran loo isticmaalo timo farabadan, oo ay ku jiraan Kokaha, oo ah noocyo kala duwan iyo tirooyin. Laga soo bilaabo qalabka waraaqaha, marka lagu daro go'doominta, waxaad u baahan doontaa xargaha iyo xayawaanka.
Tirada ugu fudud waa kumbuyuutarka. Si aad u sameysid cufur nool oo kohii ah oo leh hal dhinac 1 m, shan dhir ayaa loo baahan yahay. Waxay u baahan yihiin inay ku wareegaan geesaha kareem meel fog oo 80 cm ah, kohiya shanaad ayaa si toos ah loogu beeray xarunta. Ka dibna cidhifyada cube-ga mustaqbalka ah ayaa lagu dhajiyay dhulka waxaana qaabeeya dhismaha. Ugu horreyn, cutub adag ayaa la sameeyaa: marxalad ka mid ah laba sentimitir ayaa ka baxsan xadka. Xiddigu wuxuu ka bilaabmaa xagga sare wuxuuna sii wadaa dhinacyada. "Pure" waxay bilaabaan kaliya kaddib marka la eego muuqaal sawir ah oo la jaray.
Waa muhiim! Marka loo eego tirakoobyada, jimicsiyada waa in la gooyaa laba asbuuc kasta, laakiin waxay ku xiran tahay waxa ninkii beerta ka shaqaynayay uu rabo inuu helo. Koraaya geedkaani waa dhacdo dhab ah xitaa bannaanka u khibrad leh.
Sidee loo gooyaa Kohya qaabka kubbadda? Aynu sheegno isla markiiba in timo kochia this lagu fuliyaa "isha". Kuwa ku kora kohia markii ugu horeysay, waxaan kugula talinaynaa inaad marka hore jarjartid cube, ka dibna gooyaa oo jarjaree qaabka qaabka. Markaad baraneyso inaad kubad ka sameysid kohii, waxay kuu fududeyneysaa inaad jarayso tirooyinka xayawaanka, sida duck iyo lamb. Iyo, dabcan, mashruucyo kala duwan, gumaadka iyo buuraha.
Si loo abuuro bucad ama boodbood waa inuu koraan meel meel fiican ka ifaya dhinac kasta. Ka hor inta aadan bilaabin inaad gooyso dhirta, wareega wareega ee dhirta guntay - tani waxay noqon doontaa qaabka. Qabashada timo, ka fogow tirada inta badan oo qiimee haddii ay soo baxdo ama aan.
Waa muhiim! Inta lagu jiro qoorta, hubi in booska xayndaabku yahay mid aad u qoto dheer.
Si aad u gooyso kohiyu leh maaddo, waxaad u baahan tahay inaad wareegto wareegga wareegga. Isku habee dhawr tilmaan-bixiye oo ku yaal qulqulka oo ku dheji dusha sare. Inta lagu guda jiro timo, u gudbi goobada kor ilaa hoos. Isku day in aad sameyso sida ugu macquulsan.
Si aad u sameysid duufaan ka soo kohii, waxay qaadan doontaa dhowr sano. Kochia timo ayaa ku dhici doona laba marxaladood. Marka hore, geedka waxaa loo qaabeeyey qaab habboon oo ku xiran. Xadhig iftiin leh, midabtakoor leh, wuxuu ku xiran yahay dhinaca hoose ee kohii oo ku duudduubay xagga sare. U baahan in si cad loo ilaaliyo xaglaha curyaaminta iyo masaafada u dhexeysa tuubbooyinka. Marka xigta, hagaajinta xadhigga sare. Goobta xadhigga ayaa xajinaysa xuddunta. Ka dib marka uu marayo mindhicirada trellis ah, oo sameysma tuubooyin wareegsan.
Ma taqaanaa? Ereyga "borscht" waxaa markii hore lagu dabakhi jiray warshaddii hoggaanka ee Siberian. Wuxuu qayb ka ahaa maraq la mid ah tan ugu weyn. Later tan macnaheedu waxa weeyi borsch waa mid aan la isticmaalin.
Dhammaan noocyada kohii waxay bilaabaan in ay dacaayadaan farcan, kuwaas oo lagu beeray guriga dhexdiisa bartamihii Maarso. Yaanyaruhu ma aha mid jilicsan, laakiin xaaladaha Spartan ma aha midkeedba. Waxaa fiican in aad ku dhegto heerkulka 18-20 ° C. Sidaa darteed, waxaa fiican in la beero abuur ah ee lagu koriyo, ka dibna, marka ay Gagaab ee geedo, iyaga u wareeji si ay u furaan ciidda. Cochia jilicsan oo kaliya oo biloowday Gagaash ayaa lagu dili karaa dhaxan habeenkii Maarso.
Ka soocida abuurka la kariyey ee ciidda, waxaad u baahan tahay inaad sameysid sanduuqa mitiriga ah oo ka fogow masaafada u dhaxaysa iyaga oo aan ka yarayn 30 cm. Geedo waxay u baahan yihiin iftiin badan marka hore. Ma'aha lagama maarmaan in si qoto dheer loo qodo, kaliya hoos u cadaadi carrada. Waa inay noqdaan kuwo si weyn u waraabiya. Iyadoo la'aanta caleemo qoyan ayaa lumin doona maaraynta.
Marka cabbirka geedo waa qiyaastii 7 cm, waa wakhti aad ku soo qaadato, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo ciribtiro kohiyu.Picks waxaa loo yaqaan in ay horumariyaan nidaamka xididka geedka iyo xoojiyaan asliga ah iyo afkoda. Sida dhirta kale, Kochia ku quusi ​​weelal gooni ah leh muuqaalka caleemo dhowr ah. Waxaa lagu bedeli karaa hal mid weyn si ay u horumariyaan si xor ah iyada oo aan wax faragelin.
Wixii geedo transplanting geed, iyaga oo la wada dhulka leh iyada oo aan waxyeelayn xididada yar yar. Iska ilaali geedo iyo ka dib markaad qaadato illaa dhammaadka bisha May, ilaa ay gaadhayso ilaa 20 cm.
Isugeynta dhirta kale ee naqshadeynta muuqaalka
Kohia ee naqshadeynta muuqaalku waxay bixisaa xaddid aan xadidneyn oo loogu talagalay duulimaadka khiyaaliga ah. Warshad waxaa loo adeegsadaa sameynta dusha sare, naqshadeynta ubaxyada, xuduudaha cagaaran. Qoryaha xagaaga ee qurxinta ayaa qurxin kara wax kasta oo ka kooban iyo alpine slide. Kochia waxay xoqin doonaan rinjiyeyaasheeda oo leh caarad cagaaran oo casiir leh. Saameyn xoog leh ayaa lagu gaari karaa beerta daaqada. Isku darka kohii leh laalaabka oo ku yaala xargaha alpine ayaa deriskaaga ka dhigi doona masayr. Deedka Zigzag, sawirrada cajiibka ah iyo qaababka joomatari, xitaa wadnaha iyo carbuunta dhalmada waxaa laga gooyaa kohii.
Kochia, ku beeray sariirta ubax, gabi ahaanba isbedelaya muuqaalkeeda heesta. Kochia waa jamac xilliyeedka. Tani waxay si fiican u isticmaalaan naqshadeeyayaasha dhulka. Xilliga kuleylka, waxay ka ciyaaraan doorka cagaarka cagaaran, xilliga dayrta, midabada ayaa isbedelaya jaalaha iyo guduud, taas oo u muuqata inay ku wanaagsan tahay ubaxyada. Iyo in lagu daro chrysanthemum Kohia waa qurux badan. In floristics, gooyaa laanta kohii ayaa loo dhex geliyaa bawlaha. Qaybaha la qalajiyey waxaa loola jeedaa loona isticmaalaa walxo kala duwan.
Ma taqaanaa? Gobollada reer Brazil, geedka ayaa koraya, casiirka oo badalaya shidaalka naaftada. Copaifera langsdorffii waxay soo saartaa ilaa 50 litir oo shidaal sanadkiiba. Waa wax aan faa'iido u lahayn in ay ku koraan qiyaas balaadhan, laakiin beeraley badan ayaa dabooli kara qarashka soodiida iyadoo lagu beerayo dhowr geedood oo kala duwan.
Isticmaalka kohii meelo kala duwan
Kohia waa geed qumman oo qaali ah oo leh taaj oo qaab ah. Waxay u egtahay mid aad u weyn sida beer yar, iyo qayb ka mid ah sariiraha ubaxa. Iyada oo xoogga la saarayo rabatkah, qayb ka mid ah jardiinooyinka hore iyo iskudhafka guryaha. Beer caws ah oo aad u qurux badan.
Kochia ayaa qurxin doonta beerta kacsan, dhejiska alpine ama derbiga dayactirka. Geedka kohiyu, waxaad abuuri kartaa xuduudaha quruxda badan wareegga wareegga ubaxa, ubaxyada ama hareeraha sariiraha. Laakiin waxaa ugu wanaagsan inaad ku beerato dhagaxyada ama sameysid shey qashin ah. Kochia waxay soo degtay gawaarida lugaha waxayna sameysatay dusha.
Intaa waxaa dheer in isticmaalka naqshad muuqaalka muuqaalka ah ee Kochia loo isticmaalo nolol maalmeedka. Laga soo bilaabo geed buugan weelka adag iyo joodar xoog leh muddo dheer, taas oo ah sababta magaca "cawska venic" ku dhegay.
Kusoo guurin kohii iyo homeopathy. Daroogooyinka ku salaysan warshadani waxay daaweysaa cambaarta, cudurrada habka urojiyanka, erysipelas ee maqaarka, barar iyo laabotooyinka. Decochtions jimicsi si wacan ayaa loola socdaa. Waxaa loo qaataa sida duroogo iyo maqaarka, diaphoretic iyo caloosha.
Daawada Shiinaha iyadoo ku saleysan kohii soo saaro cadarro lagu daaweeyo cudurrada maqaarka kala duwan iyo cudurrada ciddiyaha. Caleemaha cusub ee kohii waxaa loo isticmaalaa karinta, waxaa lagu daraa koorsooyinka koowaad. Sidoo kale geedkan waxaa lagu quudin jiray silkworm iyo xayawaan guri.
Ma taqaanaa?Geedkii nidaamka xididada ugu da 'weynaa wuxuu ku koraa dalka Iswiidan, da'diisuna waa 9000 sano.
Cayayaanka ugu caansan iyo khatarta ah ee Kochia waa caarada caarada. Haddii shabakad khafiif ah u muuqata caleemaha geedka, macnaheedu waxa weeye in ay soo weerareen cayayaan. Si loo burburiyo, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daweeyo buunshaha leh cayayaanka, tusaale, Neoron. Hal millilitir oo ah walaxda ayaa lagu kala diraa litir biyo ah. Geedi socodka oo ku celceli labadii asbuuc kadib.
Sida aad uga fahantay dalxiiska kooban, beerashada kohii iyo daryeel dheeraad ah ee uma baahna dadaal badan. Dhidibku wuxuu dareenkiisa u fiirsadaa inta badan isticmaalka badan. Oo aan qabyo ahayn iyo difaac sare ee cudurada kala duwan u jeestaan ​​daryeelka kohia faraxsan.